नेपाल वायु सेवा निगम सुधारको खाँचो
नेपाल वायु सेवा निगम कुनै समय औसत नेपालीका सपनाको रोजागारदाता थियो । निजी क्षेत्रका कुनै पनि वायुसेवा कम्पनी अस्तित्वमा थिएनन् । वैकल्पिक कुनै अन्य वायुसेवा नभएको अवस्थामा बजारमा एउटामात्र उपलब्ध सेवाको कारण निगमको हालीमुहाली थियो । तर, २०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको सरकारले मुलुकमा खुला आर्थिक नीति अवलम्बन ग-यो । निजी क्षेत्रका लागि नेपालको आकाश पनि खुला […]
साउदीमा ध्वजाबाहक पुग्दा नेपालीमा झल्किएको खुसी
सूर्यचन्द्र अङ्कित राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) रियादस्थित किङ् खालिद इन्टरनेश्नल एयरपोर्टमा जहाजको भीडमा अवतरण हुँदा यहाँ रहेका नेपालीले खुसी व्यक्त गरे। साउदी अरेबियामा नेपाली ध्वजाबाहकको उपस्थिती काठमाडौँको हवाई सम्पर्क सञ...
नेपाल वायु सेवा निगम : कमजोर व्यवस्थापन
रमेशकेशरी वैद्य निपाल वायु सेवा निगम, राम्रो संस्थान तर कहिल्यै उँभो नलाग्ने । सरकारी हस्तक्षप र कमजोर व्यवस्थापनले गर्दा यो संस्थान दिनपर दिन उँधो लागिरहेको अवस्था छ । पहिला यो संस्थान यस्तो अवस्थामा पुगेको थिएन । त्यति बेलाको कुरा गर्दा यहाँ यति धेरै सरकारी हस्तक्षप हुँदैनथ्यो । कर्मचारी व्यवस्थापन राम्रो थियो । रकमको समस्या कहिल्यै […]
नेपाल समाचारपत्र3महिना पहिले
धावनमार्गमा गुडिसकेको निगमको जहाज अकस्मात रोकियो, दुई पाङ्ग्रा पन्चर
१८ चैत, काठमाडौं । नेपाल एयरलाइन्स (नेपाल वायु सेवा निगम) को न्यारोबडी जहाज ए३२० ९एन-एकेडब्यू जहाजले थाइल्याण्डको बैंककबाट काठमाडौंका लागि उड्नै लाग्दा प्राविधिक कारणले टेक अफ रद्द गरेको छ । धावनमार्गमा गुडिसकेको निगमको जहाजमा प्राविधिक समस्या हुनसक्ने देखिएपछि चालक दलले नउडाउने निर्णय गर्दै विमान अकस्ताम रोकेका थिए । एक्कासी ‘टेकअफ’ रद्द गर्दा जहाजको पछाडिका दुईवटा […]
२६ पुस, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) अहिलेको मोडलमा चल्न नसक्ने बताएका छन् । सोमबार संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा आयोजित छलफलमा अर्थ सचिव मरासिनीले वैकल्पिक मोडलमा नगएसम्म नेपाल वायुसेवा निगम ठीक ढंगले चल्न नसक्ने बताएका हुन् । ‘जतिसक्दो छिटो रिफर्म गरेर देखायोस्’ उनले भने । निगमसँग व्यवस्थापन […]
नेपाल एयरलाइन्समा महाप्रबन्धक अधिकारविहीन, के गर्छन् पौडेल ?
१४ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को कार्यकारी अध्यक्ष पदमा युवराज अधिकारीलाई नियुक्त गरेसँगै महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेल अधिकारविहीन भएका छन् । २०७७ असोज २७ गतेदेखि ४ वर्षका लागि नियुक्त भएका महाप्रबन्धक पौडेलले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दै आएकामा कात्तिक ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महाप्रबन्धकको अधिकारसमेत प्रयोग गर्ने गरी कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त […]
वायु सेवालाई निजीकरण गर्न रोक
सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) लाई निजीकरण गर्नेसम्बन्धी काम अघि नबढाउन सरकारका नाममा आइतबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।...
नेपाल एयरलाइन्सलाई पब्लिक कम्पनी बनाउने प्रस्ताव
२१ असार, काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) लाई पब्लिक कम्पनी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । निगम सञ्चालक समितिले पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न प्रबन्धपत्र र नियमावली मस्यौदा गरी सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाएको छ । निगम सञ्चालक समितिले निगमलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न प्रबन्धपत्र र नियमावली मस्यौदा गर्न सञ्चालक समिति सदस्य […]
नेवानिको ६३ वर्षे यात्रा : राष्ट्रिय पहिचान अभिवृद्धिमा उल्लेखनीय भूमिका
विसं २०१५ असार १७ (सन् १९५८ जुलाई १) मा स्थापना भएको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले आफ्नो अनवरत सेवाको ६३ औं वर्ष पुरा गरी स्थापनाको ६४ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । निगमले विभिन्न आरोह अवरोहलाई चिर्दै सीमित स्रोत साधनका बीच राष्ट्रिय पहिचान प्रबद्र्धनमा उल्लेखनीय भूमिका निर्बाह गरेको छ । देशलाई …
NepalJapan जेष्ठ २०७८
नेपाल वायु सेवा निगम र लुम्बिनी विश्वविद्यालयले पर्यटन प्रवर्द्धन र बुद्ध दर्शन बिस्तार गर्ने
थाहा खबर माघ २०७७
नेपाल वायु सेवा निगम त्यहीँका हाकिमहरुले डुबाएका रहेछन्, पढौं दुःखद कहानी
काठमाडौं । एउटा संस्था बन्नु, भत्किनु टिम वर्क र सहकर्मीप्रति नेतृत्वको सहिष्णुतामा पनि भर पर्दछ । सानो उदाहरण हेरौं, नेपाल वायु सेवा निगम किन आज टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्यो ? कुनै जमानामा ...